Otú Chineke Chọrọ Ka Ihe Dịrị Anyị
GỤỌ NKE Abbey Abui Acholi Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Chavacano Chichewa Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Cuban Sign Language Damara Dangme Danish Douala Drehu Dusun Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Fon French Futuna (East) Ga Gitonga Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibinda Igbo Indian Sign Language Indonesian Irish Italian Italian Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Mazahua Mbunda Meru Moore Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Otetela Pidgin (Cameroon) Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Sidama Silozi Sinhala Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Toba Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
IHE a na-akọkarị na tiivi, redio, na n’akwụkwọ akụkọ bụ gbasara ime mpụ, ịlụ agha, na imekpọ ndị mmadụ ọnụ. O nwekwara ike ịbụ na o nwere ọrịa gị na ya na-alụ ma ọ bụkwanụ na mmadụ nwụnahụrụ gị.
I nwere ike ịna-ajụ onwe gị, sị:
Ọ̀ bụ otú a ka Chineke chọrọ ka ihe dịrị mụ na ndị ezinụlọ m?
Gịnị ga-enyere m aka imeri nsogbu m?
Ò nwere mgbe udo ga-adị n’ụwa a?
Baịbụl zara ajụjụ a niile. Ọ zakwara ha otú ha ga-edo gị anya.
BAỊBỤL NA-AKỤZIRI ANYỊ NA CHINEKE GA-EWEPỤRỤ ANYỊ AHỤHỤ NIILE DỊ N’ỤWA A.
Ụmụ mmadụ agaghịzi na-aka nká ma ọ bụ na-anwụ anwụ. A gaghịzi enwe ihe mgbu.—Mkpughe 21:4
“Onye ngwọrọ ga-awụli elu dị ka oké ele.”—Aịzaya 35:6
“A ga-emeghe anya ndị ìsì.”—Aịzaya 35:5
A ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ.—Jọn 5:28, 29
O nweghịzi onye ga na-arịa ọrịa.—Aịzaya 33:24
Onye ọ bụla ga na-eriju afọ.—Abụ Ọma 72:16
IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI GA-ABARA GỊ URU
Ụfọdụ ndị nwere ike ịna-eche na ihe ndị ahụ e kwuru na peeji nke anọ na nke ise n’akwụkwọ a enweghị ike ime eme. Ma, Chineke kwuru na ya ga-eme ha n’oge na-adịghị anya. Baịbụl kwukwara otú ọ ga-esi eme ha.
Ma, ọ bụghị naanị ihe ndị ahụ Chineke ga-emere anyị ka Baịbụl kwuru. O kwukwara ihe anyị ga-eme ka anyị nwee ike ịna-enwe ezigbo obi ụtọ ugbu a. Chegodị gbasara ihe ndị na-echu gị ụra. O nwere ike ịbụ ụkọ ego, nsogbu ezinụlọ, ọrịa, ma ọ bụkwanụ na mmadụ nwụnahụrụ gị. Baịbụl nwere ike inyere gị aka imeri nsogbu ndị ahụ. Ihe ị ga-amụta na ya ga-akasikwa gị obi n’ihi na ọ ga-enyere gị aka ịmata azịza ajụjụ ndị a:
Gịnị mere anyị ji ata ahụhụ?
Olee otú m ga-esi merie nsogbu ndị bịaara m?
Olee otú anyị ga-esi na-enwe obi ụtọ n’ezinụlọ anyị?
Ò nwere mgbe anyị ga-ahụ ndị nke anyị nwụrụ anwụ ọzọ?
Olee ihe mere obi ga-eji sie anyị ike na Chineke ga-emere anyị ihe niile o kwere anyị ná nkwa?
Ọgụgụ ị na-agụ akwụkwọ a gosiri na ị chọrọ ịmata ihe Baịbụl na-akụzi. Akwụkwọ a ga-enyere gị aka. Paragraf ndị dị na ya nwere ajụjụ ndị e ji amụ ha. Ajụjụ ndị ahụ ga-enyere gị aka ịghọta Baịbụl nke ọma. Ọtụtụ ndị na-enwe mmasị ka ha na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl. Obi sikwara anyị ike na gịnwa ga-enwe mmasị ka anyị na gị mụwa Baịbụl. Ekpere anyị bụ ka Chineke nyere gị aka ịghọta ihe Baịbụl na-akụzi.
OTÚ E SI HAZIE BAỊBỤL
E NWERE akwụkwọ iri isii na isii dị na Baịbụl. Nke ọ bụla n’ime ha nwere isi na amaokwu. Otú a e si hazie ya na-eme ka ọ dịrị mmadụ mfe ịchọta amaokwu Baịbụl ọ na-achọ. Mgbe ọ bụla akwụkwọ a kwuru ebe a ga-agụ na Baịbụl, nọmba nke mbụ bụ isi akwụkwọ ahụ, nke abụọ abụrụ amaokwu ya. Dị ka ihe atụ, “2 Timoti 3:16,” pụtara akwụkwọ ozi nke abụọ e degaara Timoti, isi atọ, amaokwu nke iri na isii.
Ọ bụrụ na ị gbaa mbọ na-agụ amaokwu Baịbụl ndị e kwuru ka a gụọ n’akwụkwọ a, ọ ga-eme ka ịsapeta Baịbụl na-adịrị gị mfe. I nwekwara ike ibido gụwa Baịbụl kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-agụ ihe dị ka isi akwụkwọ Baịbụl atọ ma ọ bụ ise kwa ụbọchị, i nwere ike ịgụcha Baịbụl n’otu afọ.